Izindaba - Yini okufanele ngiyinake lapho iloli lamathangi selishubile?
Yini okufanele ngiyinake lapho iloli lamathangi lishisa?
1. Ngaphambi kokusebenza kwe-steamer, iphenyo yokulwa nokuchichima idinga ukususwa. Ngemuva kokuphothulwa kokusebenza komkhumbi futhi ithangi selipholile, lizobuyiselwa emhlanganweni omusha.
2. Ngaphambi kokusebenza kwe-steamer, i-plug fusible engezansi kwe-valve yasolwandle idinga ukususwa. Ngemuva kokuphothulwa kokusebenza kwesitimu nomzimba wethangi usupholile, uyabuyiselwa emhlanganweni omusha.
3. Ngaphambi kokusebenza kwe-steamer, imaski yamapayipi wokubuyisa oyili negesi idinga ukususwa. Ngemuva kokuphothulwa kokusebenza kwesitimu nomzimba wethangi usupholile, uzobuyiselwa emhlanganweni omusha.
4. Ngesikhathi sokusebenza kwe-steamer, ipayipi le-steam kufanele lihlale liqinile emlonyeni wethangi ukuvimbela ipayipi le-steam ukuba liphonswe ngaphandle kwethangi futhi lidale ukusha.
5. Abasebenzi abasebenza ku-steamer kufanele bagqoke izimpahla ezinhle zokuvikela abasebenzi. Lapho kuhanjiswa futhi kulungiswa ipayipi le-steam, kufanele liphathwe ngobumnene ukuvimbela ukungqubuzana phakathi kwepayipi nomzimba wethangi.
6. Ngemuva kokuphothulwa kokusebenza kwesitimu, vala i-valve ye-steam pipe bese ukhipha ipayipi le-steam.